Istaraatiijiyada 'Stewart Investors' ee Istaraatijiyadda Soogalootiga ee Dunida
Maalgashadayaasha Stevart waxay raadinayaan shirkado sare leh waxsoosaar iyo adeegyo faa'iido leh. McKnight waxay qiimeeyaan Stewart Maalgashadayaasha dhabta ah ee mudnaanta muddada dheer ee maalgashiga.
$ 25 milyan; laga soo bilaabo sannadka 2016
Istaraatiijiyadan sinnaanta ah ee caalamiga ah waxay raadineysaa shirkado tayo fiican leh oo tayo sare leh oo gacan ka geysta horumarinta joogtada ah: bixinta badeecado joogto ah iyo adeegyo; dhisidda kaabayaal muhiim ah; iyo bixinta helitaanka faa'iido, qiimo saxan ee alaabta dhaqaalaha.
MSCI Dhamaan Dhaqaalaha Dunida ee Dalka
Soo Celinta Lacagta: Caqabadaha hooseeya, rikoodhka rikoodhka aad ayuu u gaaban yahay qiimeyn la isku halleyn karo, miisaaniyad $ 32 milyan oo ah sida Q4 2017
Saamaynta Bulshada & Deegaanka: Sannadka 2017 Stevart Investors ayaa ka warbixiyay sida ay uga qaybgalayaan lix ka mid ah adduunka ugu weyn ee saliida laga iibsado, taas oo qaar ka mid ah ay ku jiraan sanduuqan. Sahamadoodu waxay diiradda saarayaan sida shirkadu u iibsato oo loo daba galo saliidda dabacda loo isticmaalo cuntada iyo alaabta guryaha iyo hababka kala duwan ee loo maareeyo khatarta iyo hagaajinta dhaqanka. Guud ahaan, wax soo saarka saliideed ee aan saluuga laheyn ayaa keentay in laga yareeyo dhirbaaxidda, sharci-darrada dhulka, sharci xumo iyo xad-gudubyo kale, gaar ahaan Koofurta Aasiya. Maalgashadayaasha waxay weydiinayaan wax ku saabsan sii-werarinta dardar-gelinta shirkadaha in mulkiilayaashu si taxadar leh u daawadaan; Waa tusaalayaal awood leh oo saameyn ku leh saamileyda maalgashadayaasha badankood ay iska indhotiraan.
Maareeyeyaasha Sanduuqa ee leh muuqaal mudo-dheer waa in ay la hadlaan si ay uga hortagaan muddada gaaban. Maalgashadayaasha Stewart ayaa dhigaya lacagtooda halka afkoodu uu ku saabsan yahay qiimaha sii jiritaanka muddada dheer. Halkaan waxaa ku qoran fekerkooda Maaliyadda Maaliyadeed Taageerida Qorshaha Nolosha Dheer ee Unilever.